Sidee loo xakameyn karaa HGH - Hormarinta Genotropin HGH sida cirbadeynta
By HGH Thailand February 07, 2018
Genotropin - waa shey gaar ah hormoonka koritaanka hormoonka Tayada iyo wadamada kale, ayaa naftiisa u abuuray sida tayo wanaagsan oo ammaan ah
Sidee si madaxbannaan loogu hormariyaa hoormoonka koritaanka?
Adiga kadib firfircoon ka Qalabka HGH deji qiyaasta aad u baahan tahay, waxaad bilaabi kartaa isku duritaanka
- ka saar irbadda difaaca ee irbadda
- wax kastoo diyaar u ah cirbadda, cirbadda ayaa lagu sameeyaa gacmo nadiif ah maqaarka ayaa horay loo daaweeyay khamriga
- Hawsha lagu durayo hoormoonka koritaanka hoostiisa ee maqaarka ku jira lakabka lafaha (ma ah muruq)
Ogow! Waxaad isticmaali kartaa meel kasta oo jidhka ah (lugta, lugta, caloosha ama garabka)
- Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad geliso irbad si qoto dheer oo millimitir ah 5, waxaad ku samayn kartaa xagasha qumman ama jilcan - sida sawirka
- Fadlan ha welwelin, cirbaddu waa dhuuban tahay, ma dhaawacayso
- Ka dibna riix badhanka oo ku hay wareegyada 5
Diyaar! waa wax aad u fudud adigoo ka caawinaya cirbadaha hormoonada koritaanka, waxaad sii yaraaneysaa maalin kasta caafimaadkana caafimaad badan
Ku amar hormoonka koritaanka hadda xaqiiqda guji!
u mahadnaqa waxbaridda cad